Kugara neInvestment yeSingapore uye Golden Visa
Isu tinopa Ehupfumi Yekupinda Kunze Services muSingapore ye:
● Kugara nekudyara muSingapore
● Ugari nekudyara kubva kuSingapore
● Visa yegoridhe muSingapore
● Pasipoti yechipiri kubva kuSingapore
● Kugara nekudyara kuSingapore nekudyara muzvivakwa
Best MaAgents ekugara zvakare neInvestment muSingapore uye Magweta e Kugara neInvestment muSingapore uye ma broker e real estate Residency zvirongwa muSingapore zvinoshanda pamwe chete kuitira kuchengetedza kwevatengi.
Kugara nevemaInvestment vamiririri veSingapore vanopa masevhisi ekugara nekudyara muSingapore, Kugara nehurongwa hwekudyara muSingapore, Kugara nehurongwa hwekudyara muSingapore, yechipiri Residency nekudyara muSingapore, mbiri Residency nekudyara muSingapore, ugari hwekugara nekugara nekudyara muSingapore. , Kugara zvechigarire nekudyara muSingapore, Kugara kwenguva pfupi nekudyara muSingapore, Kugara nehurongwa hwekudyara muSingapore, Kugara nenzvimbo dzekudyara muSingapore, Ugari nekudyara muSingapore, Ugari nezvirongwa zvekudyara muSingapore, Citizenship nehurongwa hwekudyara muSingapore, kechipiri Citizenship nekudyara muSingapore, hunyanzvi hwekuva Citizenship nekudyara muSingapore, pekugara uye ugari nekudyara muSingapore, ugari uye ugari nekudyara muSingapore, hupfumi Citizenship zvirongwa muSingapore, Ugari nehurongwa hwekudyara muSingapore, Citizenship nehurongwa hwekudyara muSingapore. , yechipiri pasipoti muSingapore, yechipiri pasipoti zvirongwa muSingapore, yechipiri pasipoti chirongwa muSingapore, mbiri yechipiri pasipoti muSingapore, pekugara uye yechipiri pasipoti muSingapore, repamutemo repasipoti repiri muSingapore, repiri pasipoti nekudyara muSingapore, yechipiri ugari pasipoti muSingapore, chechipiri pasipoti chirongwa muSingapore, chechipiri pasipoti zvirongwa muSingapore, goridhe visa muSingapore, yendarama visa muSingapore, goridhe vhiza zvirongwa muSingapore, goridhe vhiza chirongwa muSingapore, yechipiri goridhe vhiza muSingapore, yechipiri goridhe vhiza vhiza muSingapore muSingapore, ugari hwemo uye vhiza yegoridhe muSingapore, pekugara uye vhiza yegoridhe muSingapore, goridhe vhiza ugari muSingapore, goridhe vhiza chirongwa muSingapore, goridhe vhiza zvirongwa muSingapore.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Residency nekudyara muSingapore nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muSingapore yeResidency nekudyara: SGD 2,500,000
Nhanganyaya Singapore uye Residency neInvestment
Dzidza zvakawanda nezveSingapore
Singapore inowedzerwazve kutaridzwa se'Rudzi runonyanya kufara muSouth-kumabvazuva kweAsia 'sekureva kwe2018 World Happiness Report. Kuongorora uku kwakaratidza zvakare kuti muSingapore, mhuri ndicho chinhu chikuru uye kunyangwe paine zvinangwa zvekuda pfuma, mhuri nenetwork zvinogara zvichikunda zvimwe zvese. Iyi shanduko inobatsira kugadzira chinhu uye inofara nzanga.
Zvematongerwo enyika uye Zvemagariro Nharaunda
Singapore inozivikanwa neyakagadzikana zvematongerwo enyika. Zvisinei nekuonekwa sekubatanidzwa uye mudzvanyiriri, tsika yezvematongerwo enyika zvine musoro, zvine hungwaru uye zvinoenderana nemutemo. Chiyero chakanyanya kukosha chechiremera chevanhu kutsungirira uye kubudirira kweiyi nyika diki. Izvi zvinowanzoreva, kugadzirisa pane zvisingabvumirane asi zvakaoma uye zvine hungwaru sarudzo tichifunga zvine chekuita nenyika. Chiremera cheveruzhinji chinoisa stock mukufarira vane simba uye vachifunga izvo zvichauya.
Sezvinoratidzwa nekumisikidza kweSingapore Baba Lee Kuan Yew, Singapore yakave nesarudzo yekukwevera mumasangano angangoita 9000 epasirese, sezvo ichipa mamiriro ekutanga epasi rose munzvimbo yeTatu yeNyika. Huru manejimendi iri kuve nehunhu hwakanaka hunovimbisa nyika kutsungirira, saka vagari vane hupenyu hwakachengeteka.
Singapore inoratidzira yakakomba, yakasviba yemahara, yakavhurika mamiriro ekunze. Chiteshi cheSingapore ndechimwe chevanonyanya kubatikana papuratifomu sezvo nyika ichitenderedza zvigadzirwa nemitengo yezvinhu kune dzimwe nyika dzakasimukira dzakasimukira. Ngazvive sezvazvingaite, mukati menguva yakareba, Singapore yakawedzera hupfumi hwayo uye nhasi rave basa rekuvandudza (R&D) nzvimbo, bio-kiriniki nzvimbo, kubhengi, uye kutarisa account uye sekupedzisira kwechinangwa chekurapa cheAsia. Nhasi, Singapore ihupfumi-yakavakirwa hupfumi uye inodhonza mune yepasirese bhizinesi. Nzira dzayo dzekutengeserana dzakavhurika, kuvimbika kwevanhu, rondedzero, uye tsamba dzepasirese kujoinha chikamu chezvikonzero nei vafungidziri vasingazivikanwe vachimhanya kumahombekombe ayo. Izvi hazvinei zvisinei nemabatiro akaita mari yemunda neyevashandi nesimba, uye vakuru vebasa vanofanirwa kubhadhara chakati kurei chemubhadharo wevamiriri vavo kuCentral Provident Fund yavo.
World Economic Forum inoisa hupfumi hweSingapore seimwe yakavhurika kwazvo papasi. Rudzi rwacho zvinozivikanwawo neayo yakaderera mutero system. MuSingapore, wega mutero wemitero inotangira kubva ku0% uye yakafukidzwa pa22% yevagari nepo vasiri-vagari vachibhadhariswa kumwe kunhu mukati me15% uye 22%. Mutero wemubhadharo wemubatanidzwa muSingapore unosvika 8.5% yemabhenefiti anosvika kuS $ 300,000 uye nhanho 17% pamusoro peS $ 300,000. Kunze kwezvo, hapana mutero wemubhadharo, hapana duraini inosungirwa, uye hapana capital inowedzera mutero.
Mamiriro ezvinhu eSingapore ehukama uye madzinza musanganiswa wakasarudzika wemagariro uye nevanhu - maMalay, maChinese, maIndia, uye vekare-vanobva kumarudzi akasiyana siyana. Hupenyu hweSingapore hwakawanda-hwehukama neese ega eaya madzinza emadzinza achichengetedza mararamiro avo anoshamisa uye panguva imwe chete vachigara murunyararo. Ruzhinji rweSingapore ruzhinji rwevanhu vanobva kune dzimwe nyika nekuda kwekubatana kwevokunze sekupedzisira. Vanhu vacho vanobvumirana uye vanoremekedzana. Kukwirira kwakakwirira kunoiswa pane kuwiriranisa uye kwemarudzi concordance. Hurumende yeSingapore yakagadzika pasi shanu dzakakosha 'Shared Vales' kuvaka hunhu husingazivikanwe hunhu hweSingapore - nyika pamberi penzvimbo uye nzanga pamusoro pega; mhuri sechinhu chakakosha munharaunda; kutsigirwa kwenetiweki uye kutarisira munhu wacho; chibvumirano kwete kupokana; kubatana kwerudzi uye kwakasimba.
Vagari veSingapore vanokoshesa nhanho yakanyanya kukwidziridzwa yehupenyu nekusimudzira muAsia. Rudzi rwacho rwunowedzera mukuremekedza hwaro-rondedzero yehupenyu hwakanaka, michina yemusoro muindasitiri yekurapa, nyanzvi dzehunyanzvi, uye vane masimba. Mamiriro ekurapa ekunze haana gwapa, anoshanda uye akachengeteka. Singapore yakagamuchira yeruzhinji-yakazvimiririra mubatanidzwa mune zvekurapa mari. Yakabatana neichi chimiro ndeye 'Medisave', uko mumwe nemumwe anoshanda anofanirwa kuita kuzvipira kunodiwa mwedzi nemwedzi kuchikamu cheMedisave cheakaundi yeCentral Provident Fund. Izvi zvaizogona kuzokwanisa kushandiswa pakuiswa kwemakiriniki emitengo. Chiremera cheveruzhinji pachacho chinopa makuru, anonzwisisika ekurapa masevhisi uye nemari yezvemakiriniki manejimendi kune varombo, kumakiriniki eruzhinji ekukurumidzira nenzvimbo. Kunze kwekunyorwa kwezvitoro zvezvinodhaka, zvinodhaka zvinowanikwa zvinobudirira mumisika, zvitoro, uye zvitoro zvemadhipatimendi. Mishonga yakanaka pakushandiswa uye ine yakasimudzwa inoda kukosha. Vese vezvekurapa vakanyoreswa nemitumbi inoenderana.
Zvekutanga zvinyorwa zveResidency neInvestment yeSingapore
Chishoma kudyara kwe Kugara nekudyara muSingapore
Mari yekuwedzera ye yendarama vhiza ye Singapowo
Kugara nekudyara kweSingapore
Re-yekupinda mvumo ine PR chinzvimbo
Kuchengetedza nguva yeResidency nekudyara kweSingapore
Makore maviri kusvika matanhatu mushure mekugamuchira chimiro chePR
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa kuvagari veSingapore
Investment Sarudzo dze Kugara nekudyara kweSingapore
Mitero / Bhizinesi
Nei uchienda kune Residency nekudyara kweSingapore
Singapore, guta rakasimukira guta muEast Asia, rinozivikanwa seimwe yenyika dzakapfuma kwazvo pasirese nharaunda yaro ine tsika dzakasiyana, hupenyu hwepamusoro, hwakarongeka uye inodzorwa nharaunda. Zvivakwa zvaro zvakaomarara uye masevhisi eruzhinji, bhizinesi uye zvivakwa zvemari, dzidzo nehutano uye huwandu hwakanyanya hwematsotsi emadhorobha akaenzana unoiita imwe yenzira dzakanakisa dzekurarama nekudyara mari. Inofungidzirwa seimwe yemahombekombe akakosha emari mudunhu iri.
Kufamba kwemhuri muSingapore
Iye murume kana mukadzi uye vana vari pasi pemakumi maviri nemaviri vanogona kuverengerwa muchikumbiro chako pasina chimwezve chekudyara chinodikanwa, saka ivo vanogashira kugara kwekusingaperi, pamwe nevako uye vako vabereki vemurume nevana vasina kuroora vanopfuura makumi maviri nemaviri vanogona kugamuchira Kureba Kwenguva Yakareba Pass makore mashanu .
Kugara nehurongwa hwekudyara muSingapore
Vanokodzera vanyoreri vanofanirwa kuratidza hukuru ruzivo rwebhizinesi, kusanganisira akaongororwa mareti emari yekambani yavo kwemakore matatu apfuura, yechirongwa chekugara muSingapore. Kune akawanda maindasitiri angangoita SGD 50 mamirioni (madhora 35.8 mamirioni) ndiyo inodikanwa yepakati pagore kutorwa, uye angangoita SGD 200 mamirioni (USD 143.1 mamirioni) kuitira zvivakwa uye zviitiko zvine chekuita nekuvaka.
Kazhinji, iko kunyorera kunopedzwa mune isingasviki gore, chero magwaro ekunyorera azadzikiswa uye mari nekudyiwa kunodiwa kunoitwa nenguva.Visa yekugara yekugara, inoshanda kwemakore mashanu, uchapihwa iwe nemhuri yako yepedyo. nhengo. Zvichienderana nebhizimusi rako rekudyara kuita uye chiitiko chenguva yekugara kwako muSingapore inogona kuvandudzwa kweakawedzera makore matatu kana mashanu.
Mushure memakore maviri muridzi wekugara zvachose ndinokodzera kunyorera kuva mugari wemo, asi pakadai uchazobvunzwa kuti usiye pasipoti yako iriko, sehugari hwehukama hwakarambidzwa zvachose muSingapore.
Mari inodiwa kuSingapore
Kuti uwane kugara kwekugara kweSingapore, kudyara kweSGD 2.5 miriyoni (USD 1.8 miriyoni) kuchabvunzwa mubhizinesi idzva kana kuwedzera bhizinesi riripo muSingapore (kubva kuboka rezvinhu zvebhizinesi zvinokodzera chirongwa ichi). Neimwe nzira, iwe unogona kuisa mari yakafanana muhomwe inogamuchirwa inozoisa mari mukambani yeSingapore zvakare.
Mari inodiwa uye isingadzosere mari yekunyorera inofanirwa kubhadharwa pakutanga kwemaitiro iSGD 7,000 (USD 5,000).
Mutengi kutsigira Residency nekudyara kweSingapore
Chikwata chedu che Residency neInvestment Agents eSingapore uye Residency ne Investment Lawyers yeSingapore inopa vatengi uye mhuri dzavo muSingapore nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuSingapore, kugara nekudyara kubva kuSingapore uye mimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Masevhisi edu haana kungogumira kugari nekudyara kubva kuSingapore kana Golden Visa kubva kuSingapore kana ugari nekudyara kubva kuSingapore kana yechipiri pasipoti, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara mikana kubva kuSingapore, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida kutanga kambani mu Singapore kana kumahombekombe, zviwanikwa zvevanhu muSingapore uye nezvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari uye zvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuSingapore nekugara kwechipiri.
Rutsigiro Rwakakosha kuvagari veSingapore:
Isu tinopa zvinodhura Kugara nemabasa ekudyara yeSingapore, kuburikidza nezvatinokwanisa kutenga mari yekudyara uye yekufambisa mutemo yekuSingapore, inokwanisika kudyara yekupinda kune dzimwe nyika kukumbira vekuSingapore, inokwanisika Residency nevarairidzi vanopa mazano kuSingapore, inokwanisika Kugara nemagweta ekudyara eSingapore uye inokwanisika yekuenda kune dzimwe nyika kubvunza yakasimba kuSingapore.
Kugara nekudyara kubva kuSingapore kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza muSingapore kune 37 Nyika.
Ugari nekudyara kubva kuSingapore kuenda ku37 Nyika.
Yechipiri pasipoti kubva kuSingapore kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kubva kuSingapore kuenda ku106 Nyika.
Kugara nehurongwa hwekudyara kubva kuSingapore.
Goridhe visa zvirongwa muSingapore kune 37 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuSingapore kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri pasipoti zvirongwa kubva kuSingapore kuenda ku37 Nyika.
Mapurogiramu ebhizinesi ekupinda munyika kubva kuSingapore kuenda ku106 Nyika.
Kugara nekudyara kweSingapore kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvezvivakwa muSingapore nemaonero ekuti mutengi anofanirwa kuwana zvakanaka kudzoka mukudyara muSingapore, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwakaitwa navo kweKugara kwavo nekudyara kweSingapore. Tine tie-up nevashoma varidzi venzvimbo muSingapore vane yakanaka track rekodhi uye yavo pfuma iri munzvimbo dzakanaka muSingapore, kutora zvakanaka kudzoka.
Akanakisa edzimba dzimba dzekugara zvirongwa zveSingapore nemari in real estate muSingapore.
Unoda kuziva - Singapore Kugara neInvestment
Kugara neInvestment Gweta reSingapore rinopa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Kugara nekudyara kuSingapore. Yedu yakajairwa masevhisi ekugara zvakare neInvestment kuSingapore inosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda kuti utamire kubva kuSingapore kana kuenda kuSingapore, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Kugara nekudyara kweSingapore kune vatengi kuti vawane Residence Mvumo yeSingapore uye kudzikisa njodzi yekuramba.
Kubva pane mushumo wekushingairira weSingapore, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira zvirinani.
Kuti isu tifambire mberi neako Residency nekudyara kunyorera kuSingapore isu tingangoda makopi akaongororwa evatengi uye nhengo dzemhuri pasipoti.
Dudziro uye apostile ezvinyorwa Kugara nekudyara kunyorera kuSingapore. Magweta edu akasarudzika e Residency nekudyara kweSingapore uye goridhe vhiza inobatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zve Residence nekudyara kunyorera kuSingapore zvagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvine chekuita neSingapore.
Kana chikumbiro chako cheKugara nekudyara kweSingapore changobvumidzwa, tinogovana newe nhau dzakanaka uye tobva tatanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Isu hatitsigire kana kupa Residency nemasevhisi ekudyara muSingapore kune avo vataurwa pazasi Vanhu kana mabhizinesi muSingapore:
Residency nebasa rekudyara kuSingapore hadzisi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovera maoko nezvombo kubva kana kuSingapore.
Residency nezvirongwa zvekudyara zveSingapore hazvipi kupihwa kweTechnical kuongororwa muSingapore kana maindasitiri espionage ezvirongwa zvekudyara mukati kana kubva kana kuenda kuSingapore.
Residency nekutsvaga kwekudyara kweSingapore hazvipi kupihwa kune chero zvisiri pamutemo kana tsotsi zviitiko muSingapore.
Residency nerutsigiro rwekudyara yeSingapore hazvisi zvevanhu vanobata maGenetic zvinhu muSingapore.
Residency nebasa rekudyara kuSingapore haisi yemabhizimusi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine ngozi zvebhaoloji kana nyukireya muSingapore.
Residency nechirongwa chekudyara rutsigiro rweSingapore haruwanikwe kune vanhu veSingapore vanoita mukutengesa, kuchengetedza muSingapore, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Residency nekudyara yeSingapore haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Residency zvirongwa zvebasa yeSingapore haisi yezvitendero uye masangano avo muSingapore.
Residency nebasa rekudyara mu Singapowo haina kupihwa kune vanhu vari kuita Zvinonyadzisira muSingapore.
Kugara Kwedu magweta muSingapore haitsigire bhizinesi rekutengesa muzvinodhaka muSingapore.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veSingapore neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekuramba kupi zvako kubva kuzviremera muSingapore kubvumidzwa kunyorera Residency nekudyara muSingapore.
Kugara nekudyara muSingapore uye nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa yakanakisa Residency nerutsigiro rutsigiro muSingapore kune investment, immigration uye real estate kuronga muSingapore.
Inotsigirwa neInternational Residency neruzivo rwekudyara uye nezvinodiwa zvepamutemo zveSingapore, tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Yedu Residency nemabasa ekudyara kuSingapore inopa mitengo yakachipa kwazvo, ine chinzvimbo chinobudirira cheSingapore.
Isu takatora makore eruzivo rwekugara kwevaviri kuSingapore vachitsigira vatengi pamwe nemhuri dzavo kuSingapore.
Ruzivo Rwokugara nekudyara kwekukumbira kuSingapore uye vamiririri vepamutemo veSingapore vachipa rutsigiro kune vatengi.
Tine akanakisa magweta nevamiriri veSingapore kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Pamberi pekugara kwako kuSingapore uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro yaizovapo yebhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuSingapore
Isu tine ruzivo rwepasi rese muResidency nekudyara kusanganisira Singapore, kubatsira vatengi kubva kumativi ese epasi nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Kugara kwako nekudyara kuSingapore kunokundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu neshanu dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weKugara neInvestment kuSingapore
Kuti uverenge mutengo weKugara nekudyara kweSingapore ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi veSingapore, isu tinokwanisa kupa masevhisi ari nani nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchasanganisira, kunosanganisira, mutengo weKugara nehurongwa hwekudyara kuSingapore uye nezvimwe zvikwereti.
mhando vhiza yeSingapore
Maitiro Ekubvumidza eSingapore
Kwekugara kwenguva pfupi muSingapore
Permanent Residence muSingapore
Citizenity of Zimbabwe
Embassies uye maCommulates eSingapore
Kugara neInvestment muSingapore uye Mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mamwe mashoma masevhisi atinopa muSingapore nezvezvinoitika kana zvemberi zvinodiwa
Kana iwe uri kuronga kutamira nemhuri yako kuSingapore nekudyara mari, isu semumwe wako kuSingapore, tiripo kuti tipe zvakawanda zveimwe sevhisi uye uye kana paungangoda muSingapore nemitengo inodhura.
Kunze kwekugara zvakare nekudyara kwekudyara kweSingapore, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare muSingapore, ayo ausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nechero vamwe varairidzi veSingapore ichitigadzira shopu-yekumira yeSingapore uye nyika dze106.
"Takasimudzira makore ekuyedza uye pasi rose mu106 Nyika kubatsira mhuri, vanhu, uye bhizimusi reSingapore mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira yedu mutengi nzira yekupfuura Residency nekudyara kweSingapore nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga -singapore muSingapore nepasi rese.
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani muSingapore kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani muSingapore yakachipa nesu.)
Akaundi yeBhangi muSingapore
Chero ani investor anotamira kuSingapore angazoda account yako yebhangi muSingapore uye account yebhangi yekambani muSingapore, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Sipo yekubhadhara muSingapore
Kana iwe uchida kubvunza muSingapore, ye mhinduro dzemadhijitari muSingapore senge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muSingapore kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meResidency nekudyara ku Singapore kana uchironga ku tanga bhizinesi nekutenga riripo bhizinesi muSingapore kutanga pakarepo muSingapore.
HR Services muSingapore
Our kambani yevashandi muSingapore inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post nzvimbo muSingapore vakasununguka.
Nhamba Dzenhare dzeSingapore
Bhizinesi foni masystem eSingapore pamwe ne nhamba dzeSingapore Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muSingapore
Accounting, kushingairira kwakakodzera muSingapore uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero muSingapore
Setup bhizinesi muSingapore
Mushure meResidency nekudyara kuSingapore, setup bhizinesi mu Singapowo.
Isu tinopa pazasi kutaurwa IT mhinduro muSingapore
Kugadzira Webhu muSingapore
Ecommerce Kuvandudza muSingapore
Webhu kuvandudza muSingapore
Kubudirira kweBlockchain muSingapore
App Kubudirira muSingapore
Software Kubudirira muSingapore
Magweta eResidency neInvestment muSingapore
Isu tinopa Residency zviri pamutemo neInvestment mhinduro dzeSingapore uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuSingapore, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo yeSingapore ine vamiririri vevanoenda kune dzimwe nyika muSingapore, isu tine mukurumbira wekuburitsa zvakanakisa vatengi kushandira ruzivo rweSingapore kujekesa sarudzo dzekudyara mhinduro dzevanhu veSingapore nemhuri dzavo. Yedu Residency neboka rekudyara kuSingapore inopa yakagadziriswa mhinduro dzekubudirira kweMutengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mukadzi, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara muSingapore, pamvumo yako yekugara muSingapore inogamuchirwa.
Simba regweta reSingapore rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako neResidency nevemagweta ekudyara muSingapore. Kana iwe uri muSingapore kana uchida kushanyira Singapore, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadhare yakawedzera yekuwana Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kweSingapore uri kure, simba rako regweta rinofanira kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe mundima yeSingapore. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakatendeka kana kubvumidzwa nemumiriri weSingapore.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Kugara neInvestment muSingapore
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muSingapore?
Kugara nekudyara kuSingapore, kunogona kutsanangurwa sekuti, kuwana ugaro hweSingapore kuburikidza nekudyara muhupfumi hweSingapore kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kuti ugare nekudyara kuSingapore, ugare nehurongwa hwekudyara kuSingapore. inotsigirwa nekugara nenzvimbo dzekudyara kuSingapore, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara muSingapore, kugara kwakanyanya nemagweta ekudyara muSingapore uye kugaramo kwakanakisa nevarairidzi vezvekudyara kuSingapore. muSingapore.
Kugara nemabasa ekudyara kuSingapore | Kugara nevamiriri vezvekudyara muSingapore | Kugara nemagweta eInvestment muSingapore | Kugara nemagweta ekudyara muSingapore | Kugara nevanoona nezvekudyara kuSingapore
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara muSingapore?
Ugari nekudyara kuSingapore, hunogona kutsanangurwa sekuwana ugari hweSingapore kuburikidza nekudyara muhupfumi hweSingapore kuburikidza nenzira dzakasiyana senge bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe muSingapore. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuSingapore, ugari nehurongwa hwekudyara kuSingapore inotsigirwa nehugari nehumambo hwekudyara kuSingapore, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisa nemagweta ezvekudyara muSingapore, ugari hwakanakisa nemagweta ekudyara muSingapore uye hukama hwakanakisa nevanoona nezvekurima kuSingapore, vachishanda kuva mugari wakanakisa nevamiririri vezvekudyara muSingapore, uye akanakisa mafemu ekutsvaga vanoenda kune dzimwe nyika muSingapore.
Affordable Investor immigration services kuSingapore | Vanodhura vanoenda kune dzimwe nyika vanokumbira muSingapore | Vanodhura vatyairi vekune dzimwe nyika magweta muSingapore | Vanodhura varidzi vekupinda munyika magweta muSingapore | Vanodhura varidzi vemari vanoona nezvekupinda muSingapore | Affordable immigration law firms kuSingapore
Ndeipi tsananguro yepasipoti yechipiri muSingapore?
Yechipiri pasipoti muSingapore, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari wepamutemo weSingapore kuburikidza nekudyara muhupfumi hweSingapore kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvivakwa, bhizinesi, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera pasipoti yechipiri kuenda kuSingapore, yechipiri pasipoti chirongwa cheSingapore chinotsigirwa wechipiri pasipoti masevhisi eSingapore, kuburikidza nemagweta edu epiri epasipoti akanaka muSingapore, magweta echipiri epasipoti akanaka muSingapore uye akanakisa echipiri mapasipoti mazano eSingapore, anoshanda kumahofisi echipiri epasipoti muSingapore, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda muSingapore.
Chechipiri pasipoti masevhisi eSingapore | Chechipiri pasipoti vamiririri muSingapore | Yechipiri mapasipoti magweta muSingapore | Yechipiri mapasipoti magweta muSingapore | Chechipiri pasipoti vanopa mazano kuSingapore
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa muSingapore?
Ndarama vhiza muSingapore, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana mvumo yekugara muSingapore kuburikidza nekudyara muhupfumi hweSingapore kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, hurumende zvisungo, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. Nyorera vhiza yegoridhe kuSingapore, chirongwa chendarama vhiza yeSingapore inotsigirwa goridhe vhiza masevhisi eSingapore, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe vhiza magweta muSingapore, akanakisa egoridhe vhiza magweta muSingapore uye akanakisa endarama vhiza varairidzi veSingapore, vanoshanda pane akanakisa egoridhe vhiza vamiririri muSingapore, uye akanakisa ekupinda kwevanoona mafemu muSingapore.
Ndarama vhiza services kuSingapore | Ndarama vhiza vamiririri muSingapore | Magoridhe vhiza magweta muSingapore | Magoridhe vhiza magweta muSingapore | Ndarama vhiza vanopa mazano kuSingapore
Ndechipi chiri chidiki chekudyara kweResidency nekudyara muSingapore?
Pashoma kudyara kweResidency nekudyara muSingapore iSGD 2,500,000.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuSingapore yeResidency nekudyara here?
Ehe, gweta redu muSingapore nevamiriri muSingapore vanopa rutsigiro rweKugara nekudyara muSingapore.
Kugara nekudyara kuSingapore kunodhura here?
Mutengo weKugara neInvestment kuSingapore uye Kugara nekudyara mari zvinodiwa kuSingapore ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete kubvunza fizi yeResidency neInvestment kuSingapore, isu tinopawo yakawanda yakawanda imwe rutsigiro yeResidency neInvestment mhinduro.
Ndeapi vagari venyika vanogona kunyorera Residency nekudyara kuSingapore kana investor visa kuSingapore?
Kugara nemabasa ekudyara mari anogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeyeKugara nekudyara kuSingapore kubva kuAsia, Kugara nekudyara kuSingapore kubva kuAfrica, Kugara nekudyara kuSingapore kubva kuEurope, Kugara nekudyara kuSingapore kubva kuSouth America, Kugara nekudyara kuSingapore kubva kuMalaysia, Kugara nekudyara kuSingapore kubva kuBangladesh, Kugara nekudyara kuSingapore kubva kuIndonesia, Kugara nekudyara kuSingapore kubva kuSri Lanka, Kugara nekudyara kuSingapore kubva kuNepal, Residency nekudyara kuSingapore kubva kuIndia neResidency. nekudyara kuSingapore kubva kuUAE.
Professional Residency neInvestment Guidance yeSingapore
Kumbira kubvunza Mahara kune yako Residency neInvestment kuSingapore
Mazwi akakosha muRudzi rwekugara neInvestment yeSingapore
Mari Yezvemasimba weSingapore
Kubika kweCross Border Movement yePhysical Mari uye Mutakuri Negotiable Zvombo
Yako Gedhi Gedhi kuSingapore
SIA Engineering Kambani
Singapore Yekushanya Bhodhi
Singapore Zvirevo Pamhepo
Civil Service Koreji
Kuenda Kunze & Nzvimbo dzekutarisa
Meteorological Service yeSingapore
Airport Mapurisa (Singapore Police Force)
Sangano reNational Association of Travel Agents Singapor
Ministry of Manpower - Work Passes uye Mvumo Chikumbiro
Hurumende yeSwitzerland Investment Corporation
Amalgamated Union yeVashandi veVoruzhinji
Singapore Hurumende Directory
Singapore Government Directory inoshanda
Uori Zviitiko Ekuongorora Bureau
Bhizinesi reLayisensi Chikumbiro
Tsvagiridzo, Kunzvera uye Enterprise (RIE2020)
Changi Airport Boka
Singapore Mapurisa - Chitupa Chekujeka
Singapore Hurumende Pamhepo
National Security Coodination Sekirari
MaCustomer Standards Council
Singapore Aviation Chikoro (SAA)
Changi Ndege International
Link to Dhipatimendi Rekupinda muSingapore , Inotarisira kuumba marongero ekuchimbidza Immigration muSingapore